Fomba fijerena 6 mba hahazoana mari-pahaizana momba ny ITIL Foundation - Fampiofanana ITILY any Gurgaon
Ahoana ny fomba handraisana ny Certification ITIL Foundation
Fomba hahazoana mari-pahaizana momba ny ITIL Foundation ao Gurgaon
ITSIL no fanafohezana ny Tranomboky momba ny teknolojia fampahalalam-baovao. Tany am-piandohana dia novolavolaina tao amin'ny 1980 ny Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) mba hamolavola fitsipika maromaro. Tamin'ny Aprily 2001, ny CCTA dia tafiditra tao amin'ny biraon'ny UK Treasury - OGC.
ITIL dia andiam-panao tsara indrindra IT Service Management (ITSM) izay manampy amin'ny fanatontosana fanohanana mahomby sy ny fanomezana ny serivisy IT mbola avo lenta. Ny taranjam-pampianarana ITIL Foundation dia manome fahalalana mahomby momba ireo foto-kevitra fototra, fitsipika, fizika ary andraikitra takiana amin'ny ITSM. Ny dingana dia manomana kandida iray hahitana tsara ny ITIL Foundation fanadinana certificate.
Ny taranjam-pampianarana ITIL Foundation dia mirakitra ny fizotry ny 26 ITIL eo ambany môdely dimy:
Tetezamita momba ny fanompoana
Fanatsarana ny fanompoana maharitra
Ny fanamarinana ny ITIL dia manamarina ny fahaiza-manaon'ny profesora amin'ny fampiasana IT ho toy ny fitaovana matanjaka hanamorana ny fitomboan'ny orinasa iray.
Ity ny lisitry ny boky tsara azon'ny mpianatra vakiana mba hahazoana ny fanamarinana ny ITIL:
IT Service Management: Torolalana ho an'ny Kandidàny Exil Foundation
Navoakan'ny BCS ary nosoratan'i R.Griffiths, E. Brewster, A. Lawes sy J. Sansbury, ity boky ity dia loharano fianarana lehibe ho an'ireo izay mikendry ny hanajanona ny fanadinana amin'ny andrana voalohany.
Jereo ihany koa :Tetik'asa momba ny fanofanana ITIL
Tsara kokoa ny miantso azy io ho torolàlana fianarana raha manampy ireo mpianatra amin'ny fanombanana ny fahalalany sy ny fahavononany hiseho amin'ny fanadinana. Ity dia vokatra ofisialy efa nekena izay sokajy ho fizarana efatra-ny fizarana voalohany dia maneho ny fomba fitantanana ny serivisy; ny fizarana faharoa dia mirakitra modely samihafa amin'ny fiainana andavanandron'ny ITIL, ny ampahatelon'ny fizarana dia manome fanazavana momba ny fizotran'ny ITIL sy ny asany; Ny fizarana fahefatra dia mikasika ny mizana sy ny metika.
ITIL Lifecycle Publishing Suite
Natolotr'i OGC, ity boky ity dia manazava ny fizarana dimy fototra momba ny fototra ao amin'ny dingana dimy. Manomboka amin'ny tetik'asa fanompoana izy io, manohy ny dingana fanatsarana ny serivisy ary mandrakotra ireo modely hafa anelanelany.
Ireo boky dimy ao amin'ny efitrano dia mifandray ary ny dingana tsirairay dia mifandray amin'ny haavony teo aloha. Ny adihevitra rehetra momba ny fitantanana ny serivisy ho fampiharana. Ny Fizarana Suite ITIL Lifestyle dia azo alaina amin'ny PDF.
ITIL Foundation 2011 Exam Reference Book
Ity boky ity dia nosoratan'ny roa amin'ireo mpanazatra momba ny ITIL izay hajaina indrindra - Helen Morris, ary Liz Gallacher. Izy io dia manazava ny modely amin'ny fiainana andavan'andro amin'ny ITIL amin'ny fomba tsotra izay mahatonga azy ho mora takarina. Misy fampiasana malalaka ny sary, ny sary ary ny fanoharana izay mamela ny mpianatra hianatra samirery. Ny votoaty dia eo amin'ny lozika ara-lojika ary arahin'ny ohatra tena misy sy fanontaniana ao amin'ny faran'ny toko tsirairay mba hanamora ny fahatakarana.
ITIL Foundation Essentials: Ny Tadiavina Izay Ilainao
Nosoratan'i Claire Agutter, lehiben'ny mpampianatra ITIL efa ela, ity boky ity dia loharano mahafinaritra ho an'ireo mpianatra hianatra. Ny ITIL Foundation Essentials dia miresaka momba ny tena ilaina amin'ny ITIL amin'ny fomba voajanahary izay mahitsy amin'ny-ny-tsotra, tsotra sy mora takarina.
Jereo ihany koa :Valin'ny fanontaniana sy valiny momba ny fanadinana ITIL 2017
Na dia mety tsy ho tsara tarehy ny sariohatra dia ny torolalana azo ampiasaina ho an'ny mpandray anjara izay te-handinika fotsiny ilay foto-kevitra.
Fitaovana fototra ITIL V3 Foundation
Ny ITIL V3 Foundation Guide dia eBook maimaim-poana natolotr'i Taruu, orinasam-pandraharahana momba ny serivisy avy any Indiana. Ity loharanom-pejy 45-pejy mampiseho ny hevi-dehiben'ny fiorenan'ny IITL. Ny fampiasana azy manokana amin'ny informatika dia mahatonga azy ho vakiana tsara. Mazava tsara ary manazava ny fomba iankinan'ny aina amin'ny fomba mora takarina. Izy io koa dia toy ny boky fampidirana ho an'ny mpandray anjara ary ho an'ireo izay te-hanamafy ny fahalalany amin'ny fanampiana fanampiny.
Mandray ny fanadinanao ITIL Foundation - 2011 Edition
Ity boky ity dia mpiara-miombon'antoka tsara indrindra ho an'ireo mpianatra manohy ny fanamarinana fototra momba ny ITIL. Ny famoahana ny ITIL Foundation Exam dia fanontana ofisialy momba ny ITIL (ie TSO) ary nomena ny solontenan'ny ITIL Officier. Ity torolàlana momba ny fampiofanana ity dia manome fijery feno momba ny ITIL syllabus. Izy io dia mifantoka ny toko fa tsy ny fitantanana ny serivisy sy ny fizotran'ny fizotry ny fiainan'ny olona dimy, fa manome fanazavana momba ny fanadinana mihitsy.
Jereo ihany koa :Fepetra ankapobeny momba ny ITILA - Fitarihana feno
Ny lisitr'ireo boky voalaza etsy ambony dia tsy mahagaga loatra. Misy loharano maro hafa ahafahan'ny mpianatra manatsara ny fahalalany sy manampy amin'ny fampiofanana ITIL sy ny fanamarinana.
# fampiofanana fototra
Fanamarinana fototra momba ny fananana #
Fampandrosoana # Useful in Gurgaon
Sampana # useful in Gurgaon
Iza no sigma Six tsara kokoa sa Itil? Inona ny fahasamihafana?
Inona ny ITIL? Inona avy ny tombontsoa azo amin'ny fampahafantarana ny ITIL?